Jackgba Akuko abụghị Usoro Ọjọọ Ọjọọ - belụsọ ma ọ bụ ihe na-agbasu iwe | Martech Zone
Fraịde, Ọgọstụ 15, 2014 Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Douglas Karr
Mgbe ujo nke mbu na nwute na akuko nke onye amara ama gburu ndu ya n’izu a, amalitere m iche echiche banyere ihe aga ede na ntaneti. Ọbụna emelitere m ọwa mmekọrịta m na ụjọ m ga-abụ na ụdị ga-anwa ịgbanye akụkọ ahụ n'ime ụfọdụ isiokwu na ebumnuche nke ịbawanye okporo ụzọ (na ego) na akara ha. M na-enwe olileanya na ọ gaghị eme… ma a nkeji ole na ole mgbe e mesịrị m hụrụ onye mbụ bipụtara na LinkedIn. Ug.
Nke a abụghị atụmatụ nke edepụtara na mbụ David Meerman Scott akpọ ịgbasa akụkọ.
Jackgba akụkọ: Usoro nke ịgbanye ika gị na akụkọ ụbọchị, na-eke mgbagọ nke na - ejide anya mgbe ha mepere emepe.
Nke a bụ Ken Ungar na-atụle Newsjacking. Ken Ungar bụ onye isi oche nke U / S Sports Advisors, ụlọ ọrụ na-ere ahịa egwuregwu na ntụrụndụ dabere na Indianapolis, yana ụlọ ọrụ dị na Chicago na Charlotte.
Anaghị m emegide ya ịgbasa akụkọ. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịnara akụkọ akụkọ na-arị elu na ewu ewu ma jiri ya mee ihe mgbe ọ dị mkpa maka akara gị. Otu ihe atụ nwere ike ịbụ ozi ndị ahịa na-adịbeghị anya na nnukwu ụlọ ọrụ USB ebe mmadụ dekọrọ oku na-akụda mmụọ ebe ha na-anwa ịnweta ụgwọ gbanwere na enweghị ikike. Ọ bụrụ na gị na ụlọ ọrụ nwere ahụkebe ahịa ọrụ na ọ dịghị ụgwọ… ide ihe ederede ka atụmanya mara “Anyị enweghị ụgwọ Dị ka [fanye ụlọ ọrụ aha]” nwere ike garner gị nnọọ a bit nke anya mgbe isiokwu na-trending na-ewu ewu.
Ma nke a dị iche. Abụghị m onye na-ede okwu nke m, mana m nwere ike ịkpọ mbọ ndị m hụrụ n’izu a hacking akụkọ.
Akụkọ Hacking: usoro nke iwere nnukwu akụkọ akụkọ na-adọta uche dị ukwuu na ide ederede banyere isiokwu iji gbalịa weghaara okporo ụzọ na aha ọjọọ - mgbe ọ na-adịghị mkpa na akara gị.
E nwere ụfọdụ edemede dị egwu edere n'ofe ịntanetị na -ekere òkè akụkọ yana ekele maka onye ama ama gburu ya. Ha nwere mmetụta na-emetụ n'obi n'ezie na enweghị ebumnobi na-enweghị ịkwanyere ugwu. Anaghị m ekwu maka isiokwu ndị ahụ.
Fewfọdụ ndị na-ere ahịa ọdịnaya were ọdachi ahụ wee dee isiokwu ndị na-adịghị mkpa na aha onye a ma ama na aha ahụ naanị iji gbalịa ịdọta uche ha. Isiokwu dị ka Nkuzi ise nke azuma ahia gi nwere ike imuta na [fanye aha ndi amara]. Ana m eme aha ahụ kpọmkwem mana isiokwu m gbara àmà yiri nke ahụ. Ha tinyere aha onye ama ama ka ọ pụta na mgbasa ozi na SEO. Enweghị m ike iche n'echiche ihe ha na-eche, na-anwa ire obere ego ole na ole na azụ nke ọdachi a.
Emela ya. Brandsdị na ndị m gbara àmà na-eme nke a kwụsịrị ùgwù m ozugbo. Akwụsịrị m ha, achọghị m ha, wepụ ha na ndepụta ndị m na-agụ, agaghịkwa m ele ha anya ọzọ. Maka mkpụmkpụ oge, ha tufuru m ruo mgbe ebighị ebi. Nke ahụ abaghị uru maka ọghọm ọ bụla. Na ọ bụ naanị na mpụga oke oke agwa.
Tags: brandcelebritydavid meerman scottọnwụhackingnke ọmahacking akụkọozi-jackingịgbasa akụkọọdachiị / s egwuregwu ndụmọdụ
Aug 15, 2014 na 9: 39 AM
Akwa post Doug! Daalụ maka ịkekọrịta! Ekwenyere m kpamkpam n'ihe ị kwuru ebe a ..